Muran ka taagan magacaabis la yaab leh oo wasiir Goodax ka sameeyey Shabeellaha Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muran ka taagan magacaabis la yaab leh oo wasiir Goodax ka sameeyey Shabeellaha Dhexe
Mareeg.com: Wareegto kazoo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka C/llaahi Goodax Barre oo lagu magacaabay 4 gudoomiye ku xigeen oo uu yeelanyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe aya dhalisay muran, waxaana la sheegay in gudoomiyaha Shabeellaha Dhexe Cali Guudlaawe ay cuntami weysay arrintaasi.
Waxaa wax cusub oo lala yaabo noqday in markii ugu horreysay gobolka Shabeellaha Dhexe loo magacaabo 4 gudoomiye ku xigeen, kuwaasoo la sheegay iney kala qabanayaan xilalka kala ah:
1- Ku xigeenka Amaanka
2- Ku xigeenka Maaliyada
3- Ku xigeenka Bulshada
4- Ku xigeenka arimaha Dib u heshiisiinta.
Gudoomiyaha Gobolka Shdhexe Cali Guudlaawe ayaa ku doodayay inuu meesha ka maqan yahay doorka uu dastuurka siinayo oo ah inuu xaq u leeyahay soojeedinta ku xigeenadiisa marka la magacaabayo.
Sidoo kale Gudoomiye Guudlaawe ayaa lagasoo xigtay in xitaa tirada ku xigeenadiisa la badiyay sidaaasi darteedna ayna imaan karto in shaqooyinka leysku fahmi waayo.
Qaar ka mid ah beelaha ku dhaqan Gobolka ayaa durba ka hor-yimid, iyagoo ku tilmaamay magacaabista mid la duudsiiyay xaqii ay lahaayeen beelaha kale, hase ahaatee Gudoomiyaha Gobolka Cali Guudlaawe ayaa cabashadan darteed tegay Muqdisho, si uu ugala hadlo Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Mr. Guudlaawe ayaa u gudbin doona Mas’uuliyiinta dowladda cabashada beelaha ay ka muujiyeen magacaabidii Gudoomiye kuxigeenada, taasoo lagu tilmaamay mid baal marsan habka awood qeybsiga.
Magacydaa masuuliyiinta la magacaabay ee muranku ka dhashay ayaa kala ah:
1-Axmed Meyre Makaraan: Gudoomiye kuxigeenka 1-aad ee Siyaasada iyo Amniga Maamulka Gobolka Sh/Dhaxe.
2-Nuur Xuseen Xasan : Gudoomiye kuxigeenka Labaad Maamulka iyo Maaliyada Gobolka Sh/Dhaxe
3-Maxamed Sugaal Cusmaan : Gudoomiye Kuxigeenka 3-aad ee Arimaha Bulshada iyo Hormarinta Gobolka
4-Cali Cusmaan Ibraahim: Gudoomiye kuxigeenka 4-aad ee Arimaha Dib-uheshiisiinta iyo Federaalka
5-Yuusuf Nuur Xasan :Xoghayaha Guud ee Gobolka Shabeelaha Dhexe
Qaar ka mid ah dadka Shabeellaha Dhexe ayaa ka shaki qaba in wasiir Goodax uu dano gaar ah ka leeyahay magacaabista gudoomiye ku xigeenada faraha badan, iyadoo arrintaasi aysan horay uga dhicin gobollada dalka Soomaaliya.
Mulkiilaha Universal oo raali galin siiyay Somaliland gormuu joojin donaa xadgudubyada uu Ogaadeenay